मैले आत्मविश्वास गुमाएकी छैन् : केकी अधिकारी – manoranjansansar.com | A Entertainment News portal for all
मैले आत्मविश्वास गुमाएकी छैन् : केकी अधिकारी
चलचित्रक्षेत्रमा एक सफल नायिकाको परिचय बनाउदैंं गएकी नायिका केकी अधिकारीलाई यति बेला ठुलो समस्या आइपरेको छ । नायिका भन्न साथ सधै खुसी हुन्छन् भन्ने भ्रमलाई केकीको अहिलेको उदारणले प्रष्ट पारेको छ । मंगलबार बिहान सिभिल बैंलले नेपालको एक दैनिक पत्रिकामा निकालेको ३५ दिने सुचनाले यति बेला केकी मात्र होइन उनका फ्यानहरुलाई समेत अचम्ममा पारेको छ । सिभिल बैंकले केकीका बाबु बद्री अधिकारी र आमा लक्ष्मी अधिकारीको नाममा ऋण चुक्ता गर्ने ३५ दिने सूचना निकाले पछि यति बेला केकीको परिवारमा नपर्नु समस्या आईपरेको छ ।
यदि ३५ दिन भित्र लिएको कर्जा चुक्ता नगरे उनीहरु बस्दै आएको घर लिलामी हुन सक्छ हो यहि पिरले अहिले केकीलाई न निन्द्र न भोक लागेको छ । तर अहिले बजारमा आएका विभिन्न हल्लाहरुलाई चिर्दै केकीले आफ्नो फेसकुबमार्फत प्रष्टीकरण दिएकी छिन् । उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेकी छिन् –‘जीवनमा आईपर्ने साना ठूला कठिनाईहरुले म र मेरो परिवारलाई कहिल्यै विचलित बनाउने छैन।’
केकीले आफ्नो फेसबुकमा दिएको प्रष्टीकरण
‘मेरो स्थानमा अरू जो कोहि नै भएपनि, यस्तो परिस्थितिमा उक्त व्यक्तिले निर्वाह गर्ने भूमिका मेरो भन्दा भिन्न हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। र जस्तोसुकै अवस्थामा पनि मेरो बुवा र आमा नै मेरो प्रेरणा का स्रोतहरु हुन्। रहनेछन्।’ भन्ने प्रष्टीकरण केकीले फेसबुक मार्फत दिएकी छिन् । उनले अघि लेखेकी छिन् –‘सूख र दूखः, घाम र छाँया जस्तै न हो। केहि भौतिक सूखहरु गुमाएँ होला। तर शून्य बाट शुरु गरेर अनन्त सम्म पुग्न सक्ने आत्मविश्वास गुमाएको छुईन। मेरो प्रेरणाका स्रोतहरुले सिकाएको संस्कार गुमाएको छुईन। त्यसैले होला यी भोगाई र सिकाई हरुले आफ्नो काम प्रति ईमान्दार भई सक्रिय रहन थप उर्जा मिलेको छ। बिभिन्न माध्यमबाट म सँग सम्पर्क गर्दै मलाई हौसला दिनुहुने, स्नेह र सद्भाव प्रदान गर्नुहुने मेरा सबै आफन्त, परिवारजन, साथी-संगी र मेरा सबै शुभचिन्तकहरुमा हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दछु।’
सिभिल बैंकले जारी गरेकी ३५ दिने सुचना
‘जीवनमा कमाएको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पति नै तपाँईहरुको माया र आशीष हुन्। कलाकारको रुपमा यो भन्दा बढि अमूल्य अरु के नै हुनसक्छ र ? तपाँईहरूको माया र आशीष सदैव कायम रहने छ भन्ने बिश्वास लिएकी छु।’ केकीले आफ्नो फेसबुक मार्फत उक्त कुराको प्रष्टीकरण दिएकी छिन् । सिभिल बैंलले जारी गरेको ३५ दिने सुचनामा केकीकी आमा लक्ष्मी अधिकारीको नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला जोरपाटी गाविस वडा नं.६ सिट नं. १०२–१०३० कित्ता नं.१९३ को २२२.५३ वर्ग मिटर क्षेत्रफल रहेका जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर धितो राखी कर्जा लिएको उल्लेख छ । जसमा केकी अधिकारी जमानीकर्ता छिन् । बैंकले समयमा नै कर्जा चुक्ता नगरे बैंकिङ कसुर अनुसार ऋणी एवं व्यक्तिगत जमानीकर्तालाई समेत कालो सूचीमा राखिने व्यहोराको सूचना प्रकाशित गरेको हो ।
टुल्केकी हिरोइन ऋचा गरिबका लागी घर बनाउदैं
प्रदर्शनको संघारमा ‘श्री ५ अम्बरे’को गीत रिलिज (भिडियो सहित)